नेपाल पहिलो पटक ‘डे–नाइट’ एकदिवसीय खेल खेल्दै, गुल्सनले डेब्यु गर्लान ? - Dainik Online Dainik Online
नेपाल पहिलो पटक ‘डे–नाइट’ एकदिवसीय खेल खेल्दै, गुल्सनले डेब्यु गर्लान ?
प्रकाशित मिति : २५ भाद्र २०७८, शुक्रबार ७ : २४
शुक्रबार ओमानको मस्कटमा नेपाली टोलीले पहिलो पटक एक दिवसीय क्रिकेटमा ‘डे–नाइट’ खेल खेल्न लागेको हो । यसअघि नेपाली टोलीले टि–ट्वान्टी खेल ‘डे–नाइट’ खेले पनि एक दिवसीय खेल भने पहिलो पटक खेल्न लागेको हो । खेल नेपाली समय अनुसार अपराह्न सवा ४ बजे सुरु हुनेछ ।
पहिलो खेलमा दुई विकेटको जित निकालेको नेपाल दोस्रो खेलमा पनि जितको लक्ष्यका साथ उत्रनेछ । पहिलो खेलमा नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक चार विकेट लिएका थिए भने रोहित पौडेलले सर्वाधिक ४१ रन बनाएका थिए ।
पहिलो खेलमा विक्रम सोबले राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यु गरेका थिए । चोटका कारण उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीसहित विनोद भण्डारी, करण केसीलाई आराम दिइएको थियो । यो खेलमा गुल्सन झाले डेब्यु गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।